Falanqaynta iPhone 13 Pro Max: maxaa isbedelay | Wararka IPhone
Luis Padilla | 27/09/2021 19:15 | iPhone 13, dhowr
IPhone 13 waa halkaan, in kasta oo bilicsanaanta dhammaan moodooyinka ay aad ugu eg yihiin kuwii ka horreeyay, ku dhawaad ​​waa isku mid, isbedelada ay taleefoonadan cusub keenaan waa muhiim annaguna halkaan ayaan kuugu sheegeynaa.
Taleefanka casriga ah ee cusub ee Apple ayaa halkan jooga, sannadkanna waa kii isbeddelku ka dhacayo gudaha. Qurux ahaan waxay u horseedi kartaa in loo maleeyo inaan wajahayno isla taleefanka casriga ah, in kasta oo ay jiraan kala duwanaansho yar oo ay tahay inaan tixgelino, laakiin isbeddellada badiyaa waxay ku jiraan "gudaha". Ha ku khaldin muuqaalka dibadda, maxaa yeelay warku wuxuu saameeyaa qaybaha muhiimka ah ee taleefanka sida shaashadda, batteriga iyo kamaradda, gaar ahaan kamarada. Sannadkan falanqayntayada iPhone 13 Pro Max waxay diiradda saareysaa horumarkan si aad si sax ah u ogaato waxa terminal -kan cusub ku siinayo.
2 Muuqaalka 120Hz
3 Batariga aan laga adkaan karin
4 Sawiro ka fiican, gaar ahaan iftiin hoose
5 Fiidiyowga ProRes iyo Habka Shineemada
6 Isbeddel aad u muhiim ah
Apple waxay u haysay isla qaabkii iPhone 12 ee iPhone 13, ilaa heer ay dad badani ka hadlaan iPhone 12s. Wadahadallo aan caqli gal ahayn, waa run in taleefanka cusubi ay adag tahay in lagu kala sooco isha qaawan iyo tan la bilaabay sannad ka hor, oo leh geesaheeda toosan, shaashaddiisa oo dhammaystiran iyo moodeelka kaamerada oo leh saddex muraayadood oo lagu meeleeyay qaab -dhismeedka saddex -geesoodka ah. . Waxaa jira midab cusub, Sierra Blue, iyo saddexda midab ee caadiga ah ayaa la hayaa: dahab, lacag iyo garaaf, kan dambe waa kan aan ku tusno maqaalkan.
Qaabaynta badhanka, beddelka carrab la ', iyo isku xiraha hillaaca ee u dhexeeya afhayeenka iyo makarafoonka waa isku mid. Dhumucda terminaalka ayaa in yar la kordhiyay (0,02cm ka badan iPhone 12 Pro Max) iyo culeyskiisa sidoo kale (12 garaam oo ka badan wadar ahaan 238 garaam). Waa isbeddello aan qiimo lahayn marka aad gacanta ku haysato. Ka -hortagga biyaha (IP68) ayaa sidoo kale ah mid aan is -beddelin.
Dabcan horumar ayaa laga sameeyay processor -ka uu sido, A15 Bionic -ka cusub, kana awood iyo karti badan A14 Bionic ee iPhone 12. Ma noqon doonto wax aad adigu ogaan doontid midna, maxaa yeelay processor -ka "duugga ah" ayaa wali u shaqeeya si aad u fudud wuxuuna aad ugu filan yahay adeegsiga codsiyada ama ciyaaraha, xataa kan ugu baahida badan. RAM -ka, oo aysan Apple waligeed cayimin, ayaa weli iska beddelin 6GB -kiisii. Ikhtiyaarada kaydinta waxay ka bilaabataa 128GB, oo la mid ah tii sanadkii hore, laakiin sannadkan waxaan haysannaa nooc “Top” ah oo gaadhaya ilaa 1TB oo awood ah, wax yar ayaa danayn doona qiimaheeda iyo sababta oo ah runtii maahan lagama maarmaan inta badan dadka isticmaala.
Apple waxay ugu magac dartay Super Retina XDR Display Pro Motion. Magaca gadaashiisa gadaashiisa waxaan leenahay shaashad OLED aad u fiican oo ilaalinaysa isla cabbir dhan 6,7,, oo leh isla qaraar laakiin taas waxaa ka mid ah horumar aan sugaynay muddo dheer: heerka cabbirka 120Hz. Tani waxay ka dhigan tahay in animations -ka iyo kala -guurka ay aad u jilicsan yihiin. Dhibaatada uu wajahayo shaashadan cusub ayaa ah in animations -ka ku jira macruufka ay durba aad dareere u yihiin, markaa marka ugu horeysa waxaa laga yaabaa inaysan wax badan ogaan, laakiin waxay muujineysaa, gaar ahaan marka la furayo aaladda iyo dhammaan astaamaha "u duulaya" miiska taleefankaaga.
Apple waxay u keentay shaashadda Pro Motion (waa waxa ay ugu yeerto 120Hz) iPhone -ka, qaar baa u malayn doona inay ku dhowdahay waqtigii, laakiin waxay u samaysay si fudud oo aad u weyn oo saamaynaysa oo keliya sida aad u aragto shaashadda laakiin sidoo kale waxaa ku jira si togan durbaannada. Heerka cusboonaysiinta shaashadan ayaa ku kala duwan 10Hz markii aan loo baahnayn (tusaale ahaan marka la daawanayo sawir aan caadi ahayn) ilaa 120Hz marka loo baahdo (marka la dul wareegayo shabakadda, animations, iwm.). Haddii iPhone -ku had iyo jeer la socdo 120Hz, marka lagu daro in aan loo baahnayn, madaxbannaanida terminal -ka ayaa si weyn hoos loogu dhigi lahaa, sidaa darteed Apple waxay dooratay xakameyn firfircoon oo kala duwan iyadoo ku xiran baahiyaha xilligan, waana guul.
Waxa kale oo jiray isbeddel in badan oo naga mid ahi filayeen: xajmiga darajada ayaa la dhimay. Si tan loo sameeyo, madaxa dhegta ayaa kor loo qaaday, ilaa geeska shaashadda, oo cabbirkii moduleka aqoonsiga wejiga ayaa la yareeyay. Farqiga ma aha mid aad u weyn, laakiin waa mid la dareemi karo, in kasta oo ay yar tahay isticmaalka (ugu yaraan hadda). Apple (waxay ahayd) inay doorato inay ku darto wax kale baarka xaaladda, laakiin runtu waxay tahay inaad sii waddo ama aragto isla astaamaha batteriga, WiFi, daboolidda waqtiga iyo inta badan adeegyada goobta. Kuma dari karno boqolkiiba batteriga, tusaale ahaan. Meel lunsan oo aan arki doonno haddii cusboonaysiinta mustaqbalka hagaagto.
Isbeddelkii ugu dambeeyay ee shaashadda wax yar lagama dareemo: iftiin caadi ah 1000 nits, marka la barbar dhigo 800 nits oo ka mid ah moodooyinkii kale ee hore, iyadoo la ilaalinayo iftiinka ugu sarreeya ee 1200 nits marka la eegayo waxyaabaha HDR. Ma dareemayo isbeddello markaan arko shaashadda dharaar cad ee waddada, wali waxay umuuqataa mid aad ufiican, sida tii iPhone 12 Pro Max.
Batariga aan laga adkaan karin
Apple wuxuu gaadhay waxa u muuqday inay adag tahay in la gaaro, in baytariga aadka u fiican ee iPhone 12 Pro Max uu aad u wanaajiyay kan iPhone 13 Pro Max. Cilladdu inteeda badan waa shaashadda, oo leh heerka cusboonaysiinta firfircoon ee aan hore kuugu sheegay, processor -ka cusub ee A15 ayaa sidoo kale saamayn ku leh, si hufan sanad walba, laakiin shaki la'aan qodobka ugu weyn ee kala soocaya waa batteriga weyn. IPhone 13 Pro Max cusub wuxuu leeyahay batari awooddiisu tahay 4.352mAh, marka loo eego 3.687mAh ee iPhone 12 Pro Max. Dhammaan moodooyinka sanadkaan waxay arkeen koror batteriga, laakiin midka gaaray kororka ugu badan ayaa si dhab ah ugu weyn qoyska.
Haddii iPhone 12 Pro Max uu ahaa kan ugu sarreeya madax -bannaanida, oo ku garaacday boosteejooyinka tartanka batteriyaal waaweyn, iPhone 13 Pro Max wuxuu dejin doonaa bararka aad u sarreeya. Waxaan gacmahayga ku haystay iPhone -ka cusub waqti aad u gaaban, oo ku filan inaan taas arko Waxaan ku imid dhammaadka maalinta anigoo wata batari aad uga badan sidii hore. Waxaan u baahanahay inaan tijaabiyo maalmahaas dalbanaya ee 12 Pro Max uusan gaarin dhammaadka maalinta sababta oo ah adeegsiga aadka u daran, laakiin waxay umuuqataa in tan 13 Pro Max uu si fiican u qabsan doono.
Sawiro ka fiican, gaar ahaan iftiin hoose
Waxaan idhi bilowgii, meesha Apple dhigay inta kale waxay ku jirtay kamaradda. Module -kan weyn oo ka horjoogsanaya daboolkii sannadkii hore in ay sanadkan noo adeegaan in ka badan magdhowga dhibkan. Apple wuxuu hagaajiyay mid kasta oo ka mid ah saddexda muraayadood ee kaamerada, telephoto, xagal ballaadhan, iyo xagal aad u ballaadhan. Dareemayaal waaweyn, pixels waaweyn iyo dalool weyn labadii la soo dhaafay, oo leh zoom ka socda 2,5x ilaa 3x. Maxay tan u tarjumaysaa? Kaas oo aan ku helno sawirro ka wanaagsan, kuwaas oo si gaar ah looga dareemi karo iftiin hoose. Kaameeraha ku yaal iPhone 13 Pro Max aad ayuu ugu fiicnaaday iftiinka hooseeya oo waxaa jira waqtiyo marka habka habeenkii uu ku boodo iPhone 12 Pro Max oo uusan ku dhicin iPhone 13 Pro Max, maxaa yeelay uma baahnid. Jid ahaan, hadda dhammaan saddexda muraayadoodba waxay oggolaadaan habka habeenkii.
Apple sidoo kale waxaa ku jira astaamo cusub oo la yiraahdo "Hababka sawirka". Ma ka daashay iPhone qabashada sawirrada “fidsan”? Hagaag hadda waad beddeli kartaa sida kaamerada taleefankaagu u dhaqmo, si ay u qabato sawirro leh isbarbar -dhig sare, dhalaalaya, diirran ama qabow. Qaababka waa la sii qeexay, laakiin waad u beddeli kartaa sidaad jeceshahay, oo markaad samayso qaab waxay ahaan doontaa mid la xushay ilaa aad mar kale beddesho. Astaamahaas lama isticmaali karo haddii aad sawirro ku qaadatid qaabka RAW. Ugu dambayntiina Habka Macro, kaas oo daryeela xagal ballaadhan, kaas oo kuu oggolaanaya inaad sawirro ka qaaddo walxaha ku yaal 2 sentimitir kamaradda. Waa wax si otomaatig ah u dhacaya markaad u dhowdahay, in kasta oo markii hore aan mooday inaanay wax badan bixinayn, haddana runtu waxay tahay inay kaa tagto sawirro aad u xiiso badan.
Waxaa jira hal shay oo kaliya oo aanan jeclayn oo ku saabsan isbeddelkan ku yimid kaamerada: kororka telephoto -ka oo kordhay. Waa muraayadda inta badan loo adeegsado qaabka sawirka, iyo Waxaan jeclaa inaan yeesho zoom 2,5x ka fiican kan cusub ee 3x maxaa yeelay waa inaan aad u fogeeyaa si aan u helo sawirro, mararka qaarkoodna suurtagal ma aha. Waxay noqon doontaa arrin la qabatimay.
Astaanta app -ka sawirrada oo leh hab Macro
Fiidiyowga ProRes iyo Habka Shineemada
IPhone -ku had iyo jeer wuxuu ahaa kan ugu sarreeya marka laga hadlayo duubista fiidiyaha. Dhammaan isbeddelada kamaradda ee aan ku sheegay sawirrada waxay ka muuqdaan duubista fiidiyaha, sida muuqata, laakiin sidoo kale Apple waxay ku dartay laba astaamood oo cusub, mid saamayn doona inta badan adeegsadayaasha, iyo mid kale oo bixin doona haa , Hubaal. Midda koowaad waa duubista ProRes, koodh u eg qaab “RAW” ah kaas oo xirfadlayaashu awoodi doonaan inay ku tafatiraan fiidiyaha dhammaan macluumaadka ay ku jiraan, laakiin taasi waa inaysan saamayn gabi ahaanba isticmaalaha caadiga ah. Xaqiiqdii, waxa ay saameyneyso ayaa ah in 1 daqiiqo ProRes 4K ay ku jirto 6GB oo boos ah, marka haddii aadan u baahnayn, si fiican uga tag naafo.
Habka Farshaxanka waa mid aad u xiiso badan, iyo diyaarin iyo tababar yar, waxay ku siin doontaa natiijooyin wanaagsan. Waxay la mid tahay Qaabka Sawirka laakiin muuqaal ahaan, in kasta oo hawlgalkiisu ka duwan yahay. Markaad adeegsato qaabkan, duubista fiidiyowga waxay ku kooban tahay 1080p 30fps, taas badalkeedana waxa aad heshaa waa in fiidyowgu diiradda saarayo mawduuca ugu weyn oo inta kale ka madhan yahay. IPhon -kan ayaa si otomaatig ah u sameeya, oo diiradda saaraya daawadayaasha, oo isbedelaya iyadoo ku xiran hadday walxo cusub soo galaan diyaaradda. Waxa kale oo aad gacanta ku samayn kartaa intaad wax duubayso, ama ka dib adoo tafatirka fiidiyahaaga iPhone -kaaga. Waxay leedahay cillado, waana inay soo fiicnaataa, laakiin waa in la aqoonsadaa inay madadaalo tahay oo bixisa natiijooyin aad u cajiib ah.
Isbeddel aad u muhiim ah
IPhone 13 Pro Max cusub wuxuu u taagan yahay isbeddel aad u muhiim ah marka la barbar dhigo jiilkii hore ee dhinacyada sida ugu habboon casriga sida batteriga, shaashadda iyo kaamerada. Tan waa in lagu daraa isbeddelada caadiga ah ee sanadaha oo dhan, oo leh A15 Bionic processor cusub oo garaaci doona dhammaan astaamaha halkaas iyo inuu ahaado. Waxay u muuqan doontaa inaad gacanta ku wadato isla iPhone, laakiin xaqiiqadu waxay tahay in iPhone 13 Pro Max uu aad uga duwan yahay, xitaa haddii aysan dadka kale dareemin. Haddii taasi adiga dhib kugu tahay, waa inaad sugtaa isbeddelka naqshadeynta sannadka soo socda, laakiin haddii aad rabto inaad haysato iPhone aad uga fiican kii hore, isbeddelku waa xaq.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 13 » Falanqaynta iPhone 13 Pro Max: maxaa iska beddelay taleefanka cusub ee Apple
Ka qaadista sawirrada sidan oo kale ah labada iPhones oo dhinac ah waxaad ogaansho la’aan ku gaartay sawirro 3D stereoscopic CAADI ah. Waxaan sawiradayda oo dhan ku qaadanayay 3D muddo sannado ah, oo mid ka mid ah siyaabaha loo adeegsado laba kamaradood, mid kale ayaa leh isla moobil ama kamarad si aan u qaado laba sawir oo dhowr sentimitir u kala fog sida haddii aad moobiil kale ag dhigtay - kaliya waxay ku habboon tahay muuqaallo aan dhaqdhaqaaq lahayn, ama sidoo kale hab kale ayaa loo adeegsadaa i3DMovieCam, kaas oo adeegsada labada muraayadood ee iPhone -ka ee iswaafajinaya (sida caadiga ah iyo zoomka, ee 12 iyo 11 ee aan ahayn pro caadi ahaan iyo xagal ballaadhan, iwm).
Apple Fitness + wuxuu isku daraa Pilates -ka cusub iyo jimicsiga Meditation